Arzantina, Kolombia, Namibia ary Però, dia tsy tokony hanana famerana ny dia
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Arzantina, Kolombia, Namibia ary Però, dia tsy tokony hanana famerana ny dia
Taorian'ny famerenana teo ambanin'ny tolo-kevitra momba ny fanesorana tsikelikely ny famerana vonjimaika amin'ny dia tsy ilaina ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ny Filan-kevitra dia nanavao ny lisitry ny firenena, faritra fitantanana manokana ary sampan-draharaha hafa ary manam-pahefana amin'ny faritany izay tokony hanesorana ny famerana ny dia. Indrindra indrindra, nampidirina tao anatin'ny lisitra i Arzantina, Kolombia, Namibia ary Però.
Ny fitsangatsanganana tsy ilaina mankany amin'ny Vondrona Eoropeana avy any amin'ny firenena na sampan-draharaha tsy voatanisa ao amin'ny Annex I dia iharan'ny famerana tsy maharitra. Izany dia tsy misy fitsarana an-tendrony amin'ny fahafahan'ny firenena mpikambana hanaisotra ny famerana vonjimaika amin'ny dia tsy ilaina mankany amin'ny Vondrona Eoropeana ho an'ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka.
Araka ny voalaza ao amin'ny tolo-kevitry ny Filankevitra, ity lisitra ity dia hitohy hojerena isaky ny tapa-bolana ary, araka izay mety hitranga, dia havaozina.
Miorina amin'ny fepetra sy fepetra voalaza ao amin'ny tolo-kevitra, nanomboka tamin'ny 28 Oktobra 2021, ny firenena mpikambana dia tokony hanaisotra tsikelikely ny famerana ny fitsangatsanganana any amin'ny sisintany ivelany ho an'ny mponina amin'ireto firenena fahatelo manaraka ireto:
Shina, miankina amin'ny fanamafisana ny fifamatorana
Eo ambanin'ny sokajin'ireo fikambanana sy manam-pahefana amin'ny faritany izay tsy ekena ho fanjakana ataon'ny fanjakana mpikambana iray farafaharatsiny, tokony hofoanana tsikelikely ihany koa ny fameperana ny fivezivezena ho an'i Taiwan.
Ireo mponina ao Andorra, Monaco, San Marino ary Vatican dia tokony ho raisina ho toy ny mponin'i Eoropeanina noho io tolo-kevitra io.
Nohavaozina tamin'ny 20 Mey 2021 ny fepetra hamaritana ireo firenena fahatelo tokony hanesorana ny famerana ny dia amin'izao fotoana izao. Izy ireo dia mirakitra ny toe-javatra misy ny areti-mifindra sy ny valin'ny COVID-19 amin'ny ankapobeny, ary koa ny fahatokisana ny vaovao misy sy ny loharanom-baovao. Tokony hojerena ihany koa ny fifampiraharahana amin’ny tranga tsirairay.
Ny firenena mifandraika amin'ny Schengen (Islandy, Lichtenstein, Norvezy, Soisa) dia mandray anjara amin'ity fanolorana ity ihany koa.